November | 2009 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Computer Staff, AUNG TIN WIN, From Yadanabon Newspaper Was Also Arrested November 22, 2009
Filed under: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING,MY NEWS — Nyo Gyi @ 2:26 pm
စစ်အဆိုးရ၏ တောင်ဝှေးတစ်ခုဖြစ်သည့် ရတနာပုံသတင်းစာ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) ရက်နေ့ အာဘော် ” ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် ” ဟု ” မရနိုင် ” အစား ” ရနိုင် ” ဟု ဖော်ပြခြင်းကိစ္စအပြီး ရတနာပုံသတင်းစာမှ ညပိုင်းအယ်ဒီတာ ကိုမြင့်နိုင်၊ စာပြင်အရာရှိ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် ကွန်ပျူတာခန်းမှ ကွန်ပျူတာဆရာ အပါအ၀င် ၀န်ထမ်း (၆)ဦးထက် မနည်းကို စစ်အဆိုးရ ထောက်လှမ်းရေးမှ ပြည်သူ့မျက်ကွယ်တွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနှိပ်စက်လျက်ရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ပို့စ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
1. ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် – နောက်ဆက်တွဲ
2. စစ်အဆိုးရ၏ မန္တလေးထုတ် ရတနာပုံ သတင်းစာက ” ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် ” ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
AWAY November 9, 2009
Filed under: Uncategorized — Nyo Gyi @ 5:30 am
A Fundraiser for Burma: Burmese Food Fair and Ethnic cultural Dance November 8, 2009
Filed under: Uncategorized — Nyo Gyi @ 11:50 pm
KYAUKSE POEM by Aung Ba Nyo November 5, 2009
Filed under: OTHERS' POEMS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 9:33 am